Ho an'ny fatiantoka dia misy fomba maro sy teknika maro samihafa. Olona efa zatra mihinam-panafody amin'izao fotoana izao, tsy mitsahatra manindry ny tenany amin'ny sakafo tena izy. Ny ora hafa dia tsy mamela ny toeram-pisakafoanana, miala voly amin'ny fampiofanana tsy tapaka. Ny sasany dia voavaha amin'ny fepetra kardinaly - fandidiana plastika.
Ny fampiharana ireo fomba rehetra ireo dia manana olana iraisana iray - ny hanoanana sy ny fiankinan-doha . Mazava ho azy, ny olana ara-tsaina sy ara-batana ananany. Mampalahelo izany, ka miteraka alahelo sy ketraka. Ny Capsules Lida noho ny fatiantoka ara-boajanahary amin'ny hevitry ny sakafo sakafo dia afaka manavotra ny olona amin'ny lanjan'ny olana maro.
Fampiendrehana sy fanaovan-javatra momba ny capsules Lida
Izany zava-mahadomelina izany dia natao any Shina araka ny fomba fitsaboana nentim-paharazana nentim-paharazana. Ity famenon-tsakafo ity dia efa fantatra nandritra ny 10 taona mahery, nisy fotoana nahitana ny hatsaràna sy ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina ary nodorana mihitsy aza. Ho an'ny fanontaniana raha voarara izao ny Capsules Lida, dia azo antoka fa hiteny - amin'izao fotoana izao, ny capsules Lida dia raisina ho tsy mampidi-doza, ny hividianana ny vokatra tany am-boalohany, fa tsy ny vidin'ny fialantsiny.
Ny capsules tany am-piandohana dia ahitana firaiketana voajanahary tanteraka ary manala tanteraka ireo fanampiana avy amin'ny synthetic. Ny kapisaly Lida ho an'ny fatiantoka dia miteraka fiompiana bioactive:
mifantoka amin'ny voninkazo mandarin;
cellulose pumpkin, siramamy mamy, melon, pastèka;
Ny valan'aretina, chrysanthemum, ny fototry ny cola.
Noho ny firaisana tsy manam-paharoa momba ny votoatin'ny bioactiva, ny zava-mahadomelina dia manana fiantraikany goavana amin'ny vatana:
Miala amin'ny fametrahana ny fametrahana fatiantoana.
Manitsy ny haavon'ny kôlesterôla sy ny siramamy ao amin'ny ra.
Manadio sy manadio ny tsinainy amin'ny poizina.
Mampihena ny fimenomenonana sy mampitony ny vatana.
Mampihetsi-po ny rafi-pitabatabana, manatsara ny toe-tsaina sy ny fisainan'ny saina.
Manatsara ny fizotran'ny metabolika.
Vao haingana, ny capsules Lida dia niseho tamin'ny fivarotana lehibe indrindra, izay nisy ny fanoherana mifanohitra. Ny zava-misy dia ny fampitomboana azy ireo amin'ny alalan'ny fanampiana ny sibutramine, fantatra ho fanafarana kesika amin'ny fofona matavy . Io voka-dratsiny io dia mety misy fiantraikany ratsy amin'ny lafiny hafa, noho izany dia tsy asaina izy ireny ho an'ireo olona marary mitaiza ny vavan'ny digestive sy ny rafi-pihariana fo.
Kisendrato ho an'ny fatiantoka
Inona avy ireo vitaminina amin'ny fihinanan-kena?
Mangosteen voankazo - fananana ilaina
Nahoana ny vitamina B5 no mila ny vatana?
Namoaka ny tena taonan'ny zanany vavy i Beyonce
Ahoana no hampitombo ny hemoglobinina amin'ny ra - ny fitsaboana tsara indrindra
Sakafo efa-bolana - sakafo ho an'ny latabatra fety
Ahoana ny hanandrana avocado?
Ahoana no ahazoana ronono?
Hividy voanio katsaka
Famaritana ny fandavam-bala amin'ny zaza
Biskuit misy masom-bary
Ny fitsaboana kesika maina
Akorandriaka ngeza be
Cod miaraka carrot